Global Voices teny Malagasy » Bahrain: Nahoana Ny Biraon’i Al Jazeera No Nakatona? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Novambra 2017 12:21 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika Nancy
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Bahrain, Emirà Arabo Mitambatra, Katara, Fahalalahàna miteny, Fampandrosoana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Fangon'ny Al Jazeera
Fanamarihana: ity lahatsoratra ity dia nivoaka tamin'ny May 2010
Nambaran'i Bahrain fa vonjimaika no nanakatonana  ny biraon'ny Fantsona Al Jazeera Mandeha amin'ny Zanabolana noho ny “fanitsakitsahana ireo fifanarahana arak'asa”. Mihetsika amin'ny fampiroboroboana ity lahatsoratra ity ireo mpitoraka bilaogy sy mpibitsika – indrindra fa taorian'ny tsaho niely fa nakatona ny foibe any Katàra noho ny tatitra navoakany momba ny fahantrana ao Bahrain. Mandritra izany fotoana izany, milaza ny Al Jazeera fa tsy mbola nampiasa akory ny birao tao Bahrain fa inona no tena zava-nisy marina?
Habib Toumi, Toniziana mpanao gazety, miasa ao Bahrain, no mamboraka ny tantara eo amin'ny blaoginy:
“Ny Minisitry ny Kolontsaina sy ny Serasera no nandray fanapahankevitra hampiato ny asan'ny biraon'ny Al Jazeera fantsona mandeha amin'ny zanabolana ao Bahrain, taorian'ny nanitsakitsahan'ilay fantsona ireo fifanarahana arak'asa sady tsy manaraka ny lalàna sy fitsipika mifehy ny asa fanaovana gazety, ny fanontàna ary ny famoahana, ” hoy ny filazan'ny ministera tamin'ny fanambaràna fohy tao amin'ny Bahrain News Agency (BNA). “Foana io fanakatonana vonjimaika io aorian'ny fifanarahana mikasika ny fombafombam-pifanarahana hamaritra ireo fifandraisana afaka hitehirizana ireo zon'ny andaniny sy ny ankilany araka ny fotokevitry ny fifamaliana anaty asa fanaovana gazety eo amin'ny firenena roa tonta” hoy ilay fanambaràna. Tamin'ny May 2002 i Bahrain dia nandràra fantsona roa miainga avy any Doha tsy hamoaka fanadihadiana avy any Bahrain.
Nolazain'ny minisitry ny fampahalalam-baovao fa napetraka ilay fandraràna satria tsy nitady afa-tsy izay hanaratsiana an'i Bahrain ilay fantsom-pahitalavitra, ary nitanila mankany amin'i Israely fa manohitra an'i Bahrain. Isan'ireo firenena nanakana ny fantsona Al Jazeera mandeha any amin'ny tontolon'ny tany arabo ihany koa i Koety, Jordania, Iràka ary Palestina
Taterin'i Toumi ao amin'ity lahatsoratra manaraka iray ity, ny fihetsiky ny Al Jazeera nanoloana ireo vaovao ireo :
“Gaga sy talanjona tamin'ny vaovao izay nanapahan'ny ministeran'ny Kolontsaina sy fampahalalàm-baovao Bahrainita hevitra ny hanakatonana vonjimaika ny asan'ny biraonay any Bahrain izahay, hoy ny tambajotra iraisan'ny tany arabo.” Ratria malahelo mafy izahay satria tsy nampahafantarina anay tamin'ny fomba ôfisialy izany dia hamafisinay fa ny tsipika ankapobeny arahan'ny famoahan-dahatsoratra ato aminay sy ny politika matihanina amin'ny fandrakofanay ireo vaovao na ireo olana, na aiza na aiza toerana misy azy ireo, dia tsy niova na nohavaozina. Tsy miova amin'ny teny filamatra izay efa noraisinay hatramin'ny nanombohanay izahay” hoy ny Al Jazeera tao amin'ny haba-tranonkalany.
Ny fanapahankevitry ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny filazàmbaovao hanakatona ny birao foibe no tena manahiran-tsaina, satria tsy manana birao any Bahrain mihitsy ny Al Jazeera.
Araka ny voalazan'i Ammar Mohammed, izay miasa ho an'i Al Jazeera:
Tsy manana birao any Bahrain ny Al Jazeera. Tsy misy afa-tsy mpanao gazety iray no mivezivezy mankany Bahrain hatramin'izay ka hatramin'izao.
Fa ao amin'ny Twitter, nampisafo loha ireo mpisera ny fitadiavana ny antony ‘lojika’ ao ambadik'io hetsika io – ilay faharoa namelezana ilay fantsona manta vava tato anatin'ny valo taona.
Mibitsika i Sultan Al Qassemi avy any Emirà Arabo Mitambatra:
Akaton'i Bahrain ny asan'ny fantson'ny Al Jazeera. Angamba noho ilay tranga nitifiran'ireo mpiandry morontsirak'i Katàra ireo tantsambo bahrainita.
Izao no valintenin'ny  Bahraini SuadAK ho an'ny fanontaniako momba ny fanakatonana ny birao tsy nisy akory an'ilay fantsona:
Tsy nijery ilay fandaharana aho fa ohatra ny hoe niresadresaka tamin'ireo manampahaizana avy eny amin'ny anjerimanontolo izay mikarama latsaky ny BD200 ( 530 dolara) isam-bolana ry zareo sady naka sary ireo trano vitsivitsy nilaozana .
Hoy i Suad AK ao amin'ny bitsika fanarahana:
Raha ny fahitalavitra na ireo gazety ato aminay no mitatitra ny loza miseho any amin'ny firenena hafa, tsy maninona. Fa raha ny hafa no mirirotra ny lamba malotonay, dia lasa fitsabahana amin'ny raharaha anatiny izany… fisainana hafahafa.
Hoy ny valintenin'i Mahmood Al Yousif ao amin'ny Mahmood's Den, ao amin'ilay bilaoginy fanta-bahoaka :
Mety ve ny milaza fa ny paikadin'ny governemantan'i Bahrain hamahàna ireo olana rehetra ireo dia ny fiziriziriany hanitrika ny lohany any anaty fasika ? Miaraka amin'ireo fepetra voahevitra isan-karazany ampiharina amin'ny haino aman-jery amin'ny endriny rehetra dia azo antoka fa manome sosokevitra ho amin'ity tari-dàlana ” paikady” ity izy.
Ary manontany tena  aho ny amin'izay hiseho aorian'ny bitsik'i  SudAK izay nitakiana amin'ny Al Jazeera mba hangataka ” alàlana” isaky ny te-handefa zavatra momba an'i Bahrain izy.
@SuadAK  Ary aiza izy io vao hifarana ? Hitaky fangatahana amin'ny Guardian, New York Times ary Washington Post ihany koa izany ry zareo ?
Mandritra izany fotoana izany, ny BahrainRights, kaontin'ny Ivontoerana Mpiaro ny Zon'olombelona any Bahrain dia mibitsika ny rohin'ireo lahatsarin'ilay tatitra izay lazaina fa nitarika ny fampiatoana ny asan'ny Al Jazeera any Bahrain. Mibitsika  ihany koa ilay ivontoerana, izay vao nakataon'ny manampahefana Bahrainita :
Tatitry ny AlJazeera TV momba ny fahantrana ao Bahrain izay antony nahatonga ny fanakatonana ny biraony tany #Bahrain , FIZARANA 1
Ary inty  ny tapany faharoa :
FIZARANA 2-n'ny tatitry ny AlJazeera TV momba ny fahantrana tany Bahrain izay antony nanakatonana ny biraony tany #Bahrain  fizaràna 2
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/11/22/108633/
 no nanakatonana: http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/05/2010519123656935254.html
 Mibitsika : http://twitter.com/sultanalqassemi/status/14255208763
 Hoy : http://twitter.com/SuadAK/status/14248867624
 Hoy ny valintenin'i : http://mahmood.tv/2010/05/19/bahrain-shuts-down-al-jazeera/
 manontany tena: http://twitter.com/JustAmira/status/14252553475